Daa’imaa Kichuu Ajjeesanii, WBO Irratti Lola Labsuun Yakka Dachaa Dha! (Ibsa Ajaja Ol’aanaa ABO-WBO) – Kichuu
HomeDaa’imaa Kichuu Ajjeesanii, WBO Irratti Lola Labsuun Yakka Dachaa Dha! (Ibsa Ajaja Ol’aanaa ABO-WBO)
Daa’imaa Kichuu Ajjeesanii, WBO Irratti Lola Labsuun Yakka Dachaa Dha!
Waraanni Bilisummaa Oromoo, waraana akeeka siyaasaa ifaa qabu ta’uu, firris, diinnis ni beeka. Partiin ‘Bilxiginnaa’(PP) jedhamu akeeka siyaasaa Oromoon qabu gufachiisuun, akeeka siyaasaa Minilik bakkaan gahuuf jecha, lola WBO irratti labsee itti milkaahuu hin dandeenye. WBOnis lola kana of-irraa qolatuu irra darbuun, Tarkaanfii haleellaatti cehee, caasaan bulchiinsaa PP diiguun PP raafama guddaa keessa galchee jira.
Tarkaanfii WBOn fudhachaa jiruu fi Warraaqsa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun PPn hirriba dhabdee waan jirtuuf, sochii WBO fi Warraaqsa Oromoon gaggeessaa jiru kallattii jijjiirsisuuf, guutuu Oromiyaa keessatti shiraa fi yakka waraanaa gaggeessaa jirti. Haala kanaan, gidduu kana ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti, obbolaa sadii maatii tokko keessaa dabalatee, hayyoota, abbootii, dargaggoota, qarree fi daa’immaan irratti qiyyaafachuun qee’ee fi mana hidhaa keessaa fuudhuun ajjeesanii goodaatti darbuun fi qee’ee Oromoo gubuun duula duguuggaa sanyii gaggeessaa jiru.
Kan yakka duguuggaa sanyii saba nagaa irratti raawwatan itti xiqqaatee, ajjeechaa suukaneessaa dhala namaa irratti raawwatan kana, kan WBOn raawwate fakkeessuun, WBO maqaa xureessuuf yaaluun ammoo yakka isa lammataati. Gidduu kana loltuun PP godina Booranaa aanaa Areeroo keessatti daa’iima xiqqaa kan ganna 13, loon tiksu erga ajjeeseen booda fannisanii biraa deemuun, ‘shaneetu’ ajjeese jechuun, WBOn kan ajjeese fakkeessuun, olola afuufuun WBO fi uummata walitti buusuuf shira dalagaa turan.
Dhugaan jiru garuu, WBOn da’iimmaa kichuu, kan hirmaannaa siyaasaa keessaa hin qabnee ajjeesuu mitiiti, qaamoota isa waraanuuf qawwee baatanii itti adeeman, akkasumaas lukkee PP tahani bulchiinsa gabrummaa uummataa irratti diriirsaa jiranuu, osoo hin ajjeesiin dura akka karaa nagaan waamicha dhiyeessaafi ture ibsoota ajajaan ol’aanaan ABO-WBO baasaa ture irraa hubachuun dandahama. Dabalataanis, qabaa WBOn boji’amtootaf gochaa jirus beekamaa dha.
Haa ta’uuti, osoo akeekaa fi tarkaanfiin WBO ifaan beekamuu, guyyaa darbe keessa hogganooti PP godina Booranaa magaalaa Yaa’aaballootti, maqaa jaarrolii fi koree Gadaa jedhuun waliitti qabamanii, maqaa Oromoon murtee gurraacha seenaa keessatti nama qaanessu dabarsine jedhan. Jaarroliin jedhaman kun shira PP dhagahuun, murtee dabaa WBO loluuf labsa dabarsuunis dhagahame. Silaa gaheen jaarrolii biyyaa fi hayyuun Gadaa, dhugaa qoratanii baasuun, qaama yakka dalage sirreessu, yoo sirraawuu dide ammoo lola irratti labsuu danda’u. Haa ta’uutii jaarrolii fi hayyooti Gadaa jedhaman kun, yakka kana kan raawwate akka PP ta’uu osoo hubatanii, dhimma kana irratti osoo WBO hin mariihatiin, dantaa bubuutuu fi shira PPn dogoggoranii, WBO irratti lola labsuun, hayyummaa isaanii kan gaaffii keessa galchee fi yakka uummata irratti raawwatamuuf deemu keessatti akka harka naqatan hubatamee jira.
Yeroo ammaa kanatti qaamni humna shoroorkeessaa impaayera dulloomaa Itiyophiyaa tiksuuf WBO irratti lola labsu wallaalaa haala yeroo hin hubatne ta’uu uummati guddeessi akka dansaa hubata. Jaarsolii fi hayyuun Gadaa ofiin jedhan kun humna PP kan Oromummaa fi Oromiyaa diigaa jiru waliin hiriiruun itti hin turre. Bulchiinsa impaayeraa dulloomaa kan bara ‘Atse’ Oromoo irratti deebisuuf dhama’u deeggaruun itti hin turre. Jaarsii fi hayyuun Gadaa diina waliin dhaabbatee irree fi gaachana isaa irratti lola labse seenaa Oromoo keessatti dhagahamee hin beeku. Murni maqaa jaarrolii fi Abboota Gadaatiin waliitti qabamaan kunneen, Oromoon akka lola kaaba Impaayera xoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaatu oofaa kan jiranii fi loon uummataa guuruun diinaaf kennaan ta’uun hubatamee, uummataan akka balaaleffataman fi lola Oromoo hin ilaallannee keessatti akka hin hirmaatne ajajaan ol’aanaa ABO-WBO dhaamsa dabarsa.
Ajjeechaa sukkaneessaa da’iima Oromoo irratti PPn qumaara siyaasaa xabachuuf gaggeessites, lubbuu da’ima kichuun karaatti hambiste kun qaamuma yakka sukkaneessaa PPn godinaalee Oromiyaa biroo keessatti raawwachaa jirtu ta’uun hubatamee uummatni Oromoo marti akka balaaleffatuu dhaamaa, WBOn tarkaanfii haloo baasuutti akka tarkaanfatus ajajaan ol’aanaa ABO-WBO hubachiisa.
Walumaa galaatti PPn lola WBO irratti labsuun haaraa miti.
Lolli jaarrolii fi hayyuu Gadaa ofiin jedhan, kan PPn deeggaramani Oromoo lolatti oofan kun, gochaa isaanii kana irraa hin dhaabbataan yoo tahee, tarkaanfii itti aanuuf kan itti gaafatamuu isaanuma mataa isaanii tahuu hubachiisaa, waraana ofiif labsan kanaan rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa seenuuf akka deeman akeekaa, balaa lola kanaan wal qabatee dhufu hundaa kan gaafatamummaa isaa fudhatu warruma koratee waraana labse tahuu beeksisaa, WBOn lola irratti labsame kana akka injifannoon goolabu shakkiin hin jiru.
Dhuma irratti, shiraa fi lola PPn Warraaqsaa fi falammii Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta’uuf gaggeessaa jiru kallatti jijjiirsiisuuf dhamaa’aa jiran fashalsuuf, Oromoon tokkummaan harka wal qabatee Warraaqsa itti jiru daran jabeessuun, caasaa PP diiguu akka itti fufu waamicha isaa haaromsaa, daa’ima kichuu ajjeesanii, WBO irratti lola labsuun yakka dachaa, kan seenaan dhiifama hin goonef ta’uu ajajaan ol’aanaa ABO-WBO gad-jabeessee hubachiisa.
Sadaasa 24, 2020